I-PlayBox Neo Ithuthukisa i-Scalable Virtual Channel Playout System enezibuyekezo ezimbalwa, ezintsha | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » I-PlayBox Neo Ithuthukisa i-Scalable Virtual Channel Playout System enezibuyekezo ezimbalwa, ezintsha
I-PlayBox Neo ithuthukise ukusebenza kahle namandla kwe-Cloud2TV yayo playout yesiteshi ebonakalayo system ngokungezwa kwezibuyekezo ezintsha eziningana. ICloud2TV uhlelo olususelwa emafini, isoftware-njengohlelo olusiza abasakazi ukuthi basebenzise iziteshi zabo zokudlala kusuka kunoma iyiphi indawo emhlabeni ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sewebhu esisebenziseka kalula.
Ukuvuselelwa kwalolu hlelo lwe-SaaS olusabeka kakhulu kufaka phakathi ukuthuthuka kokungenisa okuzenzakalelayo, iPurge Task, i-Automatic Transcoding, isheke le-QC nokunye.
"I-Cloud2TV ibe yimpumelelo enkulu kumakhasimende ethu emhlabeni wonke, ibenza bakwazi ukuqala ngokushesha futhi kalula isiteshi ngokufinyelela okususelwa kuwebhu nokuhamba komsebenzi kwe-IP," kusho isikhulu se-PlayBox Neo uPavlin Rahnev. "Ukuvuselelwa okusha kukhombisa impendulo ebalulekile yamakhasimende, futhi siyathemba ukuthi izothuthukisa ukusebenza kohlelo lwethu lwe-software-centric Cloud2TV."
Ingqikithi ye-Cloud2TV isevisi yokudlala / yokusakaza ye-IP esekela i-UHD, HD kanye ne-SD.
Ingasetshenziswa ngemodi ezenzakalelayo ngokuphelele. Inikeza opharetha inkululeko yokwenza ushintsho lwezikhathi noma ukufaka okuqukethwe bukhoma phakathi kokuqukethwe okuhleliwe.
Kutholakala ekubhaliseni kwe-SaaS okulungele isabelomali, i-Cloud2TV inikeza izinzuzo eziningi njengokuqaliswa kwesiteshi esisheshayo nesifunwayo, ukukhubazeka okungapheli, ukuthembeka okungu-24/7, ukufinyelela okususelwa kuwebhu nokuhamba komsebenzi kwe-IP. I-Cloud2TV ihambisana ngokuphelele nezixazululo ezikhona ze-PlayBox Neo futhi ingasetshenziswa ukunweba amakhono nokusebenza kwazo.
I-Cloud2TV ifaka i-interface enembile yokulawula okususelwa kuwebhu nokunikezwa kwamalungelo okwenziwa ngabaphathi, ukuphathwa kwesiteshi se-TV, ukugawulwa kwezenzo kanye nezaziso. Izicelo ze-Cloud2TV yizinto zayo eziyinhloko. Uhlelo ngalunye lokusebenza lusebenza ngawodwana kepha lusebenzisana ngokuseduze nabanye ukunikeza isethi ephelele yezinsizakalo zokusakaza ezisekela ukuhamba komsebenzi kwesiteshi sonke se-TV. Izinhlelo ezithile ze-Cloud2TV zinikezwa ukungena ngaphakathi kokuqukethwe, ukuhlelwa kwemidwebo, ukuphequlula imidiya ngokuphathwa kwemethadatha nokunqunywa kwesiqeshana, ukulawula ikhwalithi nokuqinisekiswa, ukudluliswa kwamakhodi, ukuphathwa kohlu lwadlalwayo nokugawulwa kwamabhuku.
Ukuvuselelwa kweSoftware ne-PlayBox Neo 24/7 ukwesekwa komhlaba kuvamile.
ICloud2TV itholakala ngezindlela ezintathu:
IPlatform-as-a-Service isetshenziselwe ifu eliyimfihlo nge-CDN yokufinyelela emhlabeni wonke
Isoftware-as-a-Service isetshenziswe emafwini asesidlangalaleni afana ne-Amazon AWS, iMicrosoft Azure noma iGoogle
Isistimu ye-turnkey esendlini yokuthunyelwa ngumsakazi noma umhlinzeki wesevisi
Ngeminye imininingwane, sicela uvakashele i-PlayBox Neo ku www.sidinloku.com
Olandelayo: I-Broadcast Internet Drives Real-World Enterprises. Amabhizinisi asafufusa afuna ikhono lokuhlanganisa i-ATSC 3.0